भर्खरै पोखराबाट आयो अर्को ठुलो दुखद ख़बर ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै पोखराबाट आयो अर्को ठुलो दुखद ख़बर !
भर्खरै पोखराबाट आयो अर्को ठुलो दुखद ख़बर !
पोखरा मनपा– १३ आर्बामा दुई टु-क्रा पारिएको अवस्थामा महिलाको श-व फेला परेको छ । अन्दाजी ३५ देखि ४० बर्षिया महिलाको शव आर्बा साझा बस्ति नजिकैको जंगलमा क्षत विक्षत अवस्थामा फेला परेको हो । दाउरा काट्न गएका स्थानीयले महिलाको शव देखे पछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । आधा शरीर जमिनमा र आधा शरीर बोरामा राखेर दुई टुक्रा पारेर फालिएको अवस्थामा शव फेला परेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए ।
मृतकको पहिचान हुन नसकेकाले घटनाको बारेमा थप अनुसनधान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । दाउरा काट्न गएका स्थानीयले महिलाको शव देखे पछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । आधा शरीर जमिनमा र आधा शरीर बोरामा राखेर दुई टुक्रा पारेर फालिएको अवस्थामा शव फेला परेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए ।
बिष्णुमायाकाे पढाइ खर्च दोर्जे मोक्तानले सहयोग गर्ने
काठमाडौ / बिष्णु माया लो तामाङको सम्पूर्ण पढाइ खर्च ब्याबसायी, कलाकार तथा समाजसेवी फुर्बा दोर्जे मोक्तानले सहयोग गर्ने भएका छन । मलेसियालाई कार्यक्षेत्र बनाइ ब्यबसाय तथा कलाकारितामा सक्रिय फुर्वाले बिष्णुमायालाई भेटेर रु १० हजार नगद तत्कालै सहयोग गर्दै यस्ताे प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
बिष्णुमायाकी आमा मनमाया लोको फेब्रुअरी ६ मा क्यान्सरको करण नेपाल क्यान्सर हस्पिटल ललितपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । बुबा वीर बहादुर लोको पनि क्यान्सरको उपचार भईरहेको छ । उपचारको लागि संसार भरका नेपालीहरुले सहयोग गरिरहेका छन ।कमलामाइ नगरपालिका ४ चुनेटार सुन्धुली घर भएका उक्त परिवारले काठमाडौको कपनमा किराना पसल गरेर परिवार चलाउदै आएकाे थियाे ।
हाल क्यान्सरको कारणले बुबा थला परेको र आमाको मृत्यु भएपछि बिष्णुमायालाई आर्थिक अभाव परेकोले अाफुले बिष्णु माया लो तामाङको सम्पूर्ण पढाइ खर्च ब्यहाेर्ने बांचा गरेकाे फुर्बा दोर्जे मोक्तानले हिमाल टाईम्सलाई बताएका छन ।१७ बर्षे बिष्णु माया अहिले बर्षबज्र इन्टरनेस्नल कलेज जोरपाटीमा कक्षा ११ मा अध्यानरत छिन । खबरपत्रिकाएनपी डटकमबाट ।
भासणले मात्र देश बन्दैन – हेर्नुहोस यो तस्बिरहरु !
यस्तो अवस्थामा भेटिइन् साम्राज्ञी(हेर्नुहोस उनको हट तस्विर)
पथरी काण्ड: रिनालाई कमल नेपालले मारेको खुलासा संखा , रिना काण्ड देखी सरिता काण्ड सम्मा गरे पर्दाफास (भिडियो)
नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट?
०७७ साल मंसिर १६ गते मंगलबार, हेर्नुहाेस तपाईहरूको राशिफल अनुसारकाे भाग्य!